Nepal Mamila | ‘प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ’ जयराम यादव, मन्त्री सामाजिक विकास, प्रदेश नं. १ - Nepal Mamila ‘प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ’ जयराम यादव, मन्त्री सामाजिक विकास, प्रदेश नं. १ - Nepal Mamila
‘प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ’ जयराम यादव, मन्त्री सामाजिक विकास, प्रदेश नं. १
जयराम यादव भर्खरै प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन् । नेकपा एमालेको सरकार रहेको प्रदेशमा एमालेको विभाजनपश्चात नयाँ गठबन्धन बन्यो र त्यसले केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन पुग्यो । जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित यादव संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । उनै मन्त्री यादवसँग नेपालमामिलाका लागि सीता तुम्खेवाले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सर्वप्रथम सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, हार्दिक बधाई छ ।
बधाइको लागि धन्यवाद । र, दीपावली र छठको शुभकामना ।
मन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चुनौती कि अवसरको रूपमा लिनुभएको छ ?
प्रदेश नम्बर १ मा सामाजिक विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइराख्दा मैले यसलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरको रूपमा लिएको छु । यो अवसरमा प्रदेश सरकार र प्रदेशवासी जनताका लागि राम्रो काम गर्न सकुँ भन्ने मेरो इच्छा छ । त्यसैले यो मेरो लागि चुनौती हैन राम्रो काम गर्ने अवसर हो ।
हाम्रो समाज विविधता छ, यहाँ सम्पूर्ण समाजको आवाज बोक्ने वैकल्पिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, समाजलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र कसरी काम गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देश हो । हामीले प्रादेशिक सरकार प्राप्त गरेका छौं । त्यही शिलशिलामा प्रदेश नम्बर १ मा अहिलेको व्यावस्थामा जति पनि हामीले गर्नुपर्ने कुरा रहेका छन् त्यो आम प्रदेशवासी र पहिचान र हक अधिकारको सवालमा आम नेपाली जनता र आम प्रदेशवासीको हितमा सबैलाई मिलाएर लिएर जाने र उत्पीडित समुदाय र वर्गहरू जो हिजोदेखी राज्यद्वारा विभेदमा परेका छन् र राज्यमा पहुँच छैन उनिहरूलाई जोड्दै जाने र सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत गरिने कार्यहरूलाई हामी आम प्रदेशबासीको हितमा प्रयोग गर्नेछौं ।
प्रदेश नं. १ मा सामाजिक विकासका योजनाहरू केके हुन् ?
सर्वप्रथम त मैले सपथ ग्रहण गरेको आज ४ दिन भयो । दिपावली छठको राष्ट्रिय विदाका कारण कर्मचारी साथीहरूबाट धेरै कुराहरू ब्रिफिङ हुन बाँकी छ । प्रदेशसभाको मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट जुनजुन शिर्षकमा प्रदेश सरकार र यहाँको कार्यविधिहरूले जुन कुरालाई निर्देशित गरेको छ त्यो हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम अगाडि बढाउने मेरो प्रयास हुन्छ । सरकारी कर्मचारीबाट धेरै ब्रिफिङ लिने कार्यक्रम बाँकी रहेको हुँदा अहिले यो क्षेत्रमा राम्रो गर्ने भन्दा पनि यो मन्त्रालयबाट निर्देशित कार्यहरूलाई पूर्णता दिने काम गर्नेछु ।
योजना तर्जुमाको लागि समय त पक्कै छोटो होला नि ?
छोटोभन्दा पनि समयको अलिक अभाव त छ नै । तैपनि हामी राम्रो काम गर्नेछौं ।
गठबन्धन सरकार भएकोले काममा सम्झौता पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि ?
हुन त हाम्रो सरकार १००% गठबन्धनकै सरकार हो । तर हाम्रा माननीयज्यूहरूले जुन मन्त्रालय र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ त्यसको मातहतमा रहेर हामी सबै मिलेर कार्यलाई अगाडी बढाउछौं । त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारको निर्णय हुनेछ र त्यस मन्त्रालयबाट हुने जिम्मेवारीलाई हामी पूरा गर्छौं ।
यस सरकारले चर्चामा रहेको प्रदेशको नाम पनि जुराउँछ कि ?
प्रदेशको नामाङ्कनको सवालमा हाम्रो पहिलो प्रयास हुनेछ । हाम्रो जुन गठबन्धन छ यो गन्ठबन्धनले मात्रै हाम्रो दुई तिहाई पुग्दैन । त्यसैले नामांकनको सवालमा हामी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै समुहबाट हामी छलफल गरेर कुरा मिल्यो भने हामी नामांकनको कुरालाई टुङ्याउने छौं ।
विशेषगरी कस्तो नामको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीले पहिला पनि पहिचान र सामाथ्र्यलाई आधार मानेको हो । अहिले तो सिमाङ्कनमा पनि केही असन्तुष्टिहरू रहेका पहिलो फेजको टुगिंएको छ । यो नामाङ्कनको सवालमा हामी चाहिँ पहिचानको सवालमा जानुपर्छ र प्रदेश नम्बर १ को जुन पहिचानका कुराहरू छन् र ती पहिचानसँग सम्बन्धित हामीले उठाएका मुद्दाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी आयो भने त्यसलाई हामी अगाडि बढाउछौं ।
पहिचानको खरो आवाज उठेको गर्दा प्रदेश १ को नामाकरणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ होइन ?
त्यही त मैले भने नि ! उठेका सबै सवालहरू प्रदेशसभामा प्रस्तावको रूपमा आउछन् । जुन प्रस्तावमा/नाममा हाम्रो एकमत हुन्छ र संख्या पुग्छ त्यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गर्छौं ।
अघिल्लो सरकारलाई देशभर बहुमतको दाबी गरिएको थियो, जसलाई हल्लाउन चलाउन नसकिने अवस्था थियो, यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्नुभयो, यस्तो कल्पना गर्नुभएको थियो ?
राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ । कल्पना र असम्भवको कुरा हुदैन । कार्तिक महिनामा बाढी आउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । राजनीति पनि त्यस्तै हो । झन्डै २ तिहाइको केपी ओलीको सरकार संघ र प्रदेशहरूमा पनि थिए । तर एउटा केपी ओलीले गर्दा संघीय सरकार पनि गयो र ६ वटा सरकारमा पनि वहाँको सरकार गयो । त्यसैले जहाँ संख्या छ त्यहाँ जे कुरा पनि सम्भव छ । अहिले पनि हाम्रो गठबन्धन संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो ७ वटै प्रदेशमा र संघीय सरकार बनेको छ । त्यसैले ‘युनिटी इज स्ट्रेन्थ’ भन्छ यति यो युनिटी रह्यो भने के पनि सम्भव हुन्छ ।
खासमा यो कार्यकालको मन्त्री नै बन्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन ?
म त पहिलो संविधानसभाको सदस्य पनि हो । मन्त्रीभन्दा पनि मैले पहिला पनि मन्त्री बराबरकै जिम्मेवारी पाइरहेको थिएँ । तर त्यतिखेर म नगएको हो । र, अहिले पनि यो हाम्रो गठबन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न म मन्त्री बनेको हो । नत्र त जतिखेर २०७४ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो, त्यतिबेला पनि मलाई मन्त्रीको अफर आएकै हो । तर हाम्रो पार्टीको लाइन तत्कालीन सरकारसँग नमिलेको हुनाले म व्यक्तिगत रूपमा र पार्टी सरकारमा नगएको हो र अहिले गठबन्धनको सरकारलाई पूरा गर्न सरकारमा गएको हो ।
अहिले यहाँको पार्टीबाट ३ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, आगामी निर्वाचनबाट यो संख्यामा कस्तो हेरफेर आउँला ?
हामीले यसलाई २ नम्बर प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ । ७ वटा प्रदेशहरूमध्ये प्रदेश नम्नर १ गरेर ४ वटा प्रदेशमा हाम्रो पार्टी सरकार रहेर हाम्रो उपस्थिति रहेको छ । मैले के बुझेको छु भने यो २ नम्बर प्रदेशपछि जसपाको नेतृत्वमा सम्भावना बोकेको यहि १ नम्बर प्रदेश हो । र, आउदो चुनावमा हाम्रो निर्णायक मत हुन्छ । जसपाकै नेतृत्वमा यहाँको सरकार बन्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।
वैकल्पिक पार्टीको नारा बोकेको पार्टी प्रदेश नं. १ मा पनि वैकल्पिक बन्ला ?
१००% हाम्रो वैकल्पिक पार्टी नै हो । कांग्रेस कम्युनिस्ट यो २ वटा बुढा पार्टीहरू अहिले आफैमा लडेर, झगडा गरेर झन्डै झन्डैको २ तिहाइ पाएका तत्कालीन नेपाली काँग्रेस र अहिलेका एमालेले पनि नेतृत्व चलाउन सकेनन् । त्यसैले मलाई लाग्छ अब यो कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको परिदृष्य हेरिसकेपछी अहिलेको नेतृत्व भनेको उपेन्द्र यादव नै हो । र, जसपामा भएका शिर्ष नेताहरू अशोक राई, उपेन्द्र यादव, युवराज कार्की, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका जुन नेताहरू छन् बहुल जातीय पार्टी छ । एकल जातिको ठूला पार्टीहरू काँग्रेस कम्युनिष्टको भन्दा पनि सम्पूर्ण बहुभाषिक नेपालमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने यो जनता समाजवादी पार्टी भएको हुनाले यो भोलिको दिनमा वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
तस्बिरः कमन देवान